Samsung Gear S2 smart watch wuxuu la jaan qaadayaa iPhone | Wararka IPhone
Smartwatch-ka Samsung Gear S2 wuxuu la jaan qaadayaa iPhone-ka
Pablo ortega | | Tartanka, Noticias, kuwa kale
Samsung waxay u fureysaa adduunka Apple waxayna ku sameysaa mid ka mid ah alaabteeda ugu dambeysay: the Gear S2 smart watch. Tan waxaa xaqiijiyay dhowr ilo ku dhow shirkadda Kuuriyada Koonfureed. Sida muuqata, Samsung waxay ka shaqeyneysaa horumarinta arjiga "Maareeyaha Gear" ee iOS, kaas oo arki kara iftiinka si dhakhso leh. Tani waxay ka dhigan tahay in smartwatch-ka 'Gear S2 smartwatch' uu la shaqeyn doono iphone-keena iyo shaqooyinkiisa oo dhan lagu maamuli karo barnaamijka Maareeyaha Gear.
Sidan oo kale, Samsung waxay dooneysaa inay si toos ah ula tartanto mid ka mid ah kuwa ay aadka u xafiiltamaan xilligan: Apple Watch. Habka ugu fiican ee loo sameyn karaa waa shey leh curve la mid ah saacadaha dhaqameed, laakiin interface ah oo shaki ku eg kan Apple Watch. Kahor muuqaalka Gear S2, Samsung waxay dooratay saacado caqli-gal ah oo leh qaabab afar-geesood ah iyo hagitaan aad uga duwan waxa aan ku aragno Gear S2.
Waxay ahayd bishii Sebtember ee la soo dhaafay markii shirkadda Kuuriyada Koofureed lafteeda qirtay suurtagalnimada ahaanshaha ka shaqeynaya shey iPhone ku habboon. Xaqiiqda ah in warkan uu xoog yeeshay saacadihii ugu dambeeyay ayaa naga dhigeysa inaan u maleyno in iswaafajinta Gear S2 iyo iPhone ay soo dhowdahay, in kastoo aan wali si rasmi ah loo xaqiijin.
Kahor intaan warku rasmi noqon, Samsung waa inay ka gudubtaa "imtixaanka" App Store. Apple ayaa dib u eegi doonta barnaamijka waxayna u baahan doontaa inay hubiso inay la kulantay dhammaan shuruudaha iyo xaaladaha keydkeeda.
Samsung Gear S2 miyuu ka jari doonaa iibka Apple Watch?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » kuwa kale » Smartwatch-ka Samsung Gear S2 wuxuu la jaan qaadayaa iPhone-ka
Sidee ayuu u xumaaday iibku? XD
Waxay ila egtahay mid aad ii xiiso badan! Qaar badan oo naga mid ah ayaa jeclaan lahaa inaan u baxno orod saacad leh qalabka garaaca wadnaha, kaas oo keydiya muusigga, Bluetooth qalabka dhegaha la gashado, ... ka dibna waafajiyo, orodoo taleefanka la'aan! Gear S2 wuxuu umuuqdaa inuu gaarsiinayo. Laakiin waxaan rabaa inaan sugo daawashada 2 sanadka soo socda oo aan arko haddii ay nala fajaciso ...
Ku jawaab Quim
Waxaan rajeynayaa in dhowaan aan heli karo waxyaabo cad. Anigu waxaan ahay taageere Apple, laakiin Apple-kan saacaddiisa leh qaab laba jibbaaran, baytariga calaacalka leh iyo qiimihiisa aadka u sarreeya ayaa gebi ahaanba dib ii dhigay. Samsung waa mid aad u guuleysatay, waxay umuuqataa saacad dhaqameed, batari ka fiican Apple oo leh farsamooyin casri ah oo waxtar leh. Sidoo kale aniga nimcadu waxay kujirtaa inaan awoodo inaan sameeyo taleefanka la'aantiis, oo aan ula baxo kaliya wax yar, laakiin hada waa fogtahay.
IOS 9 horeyba waxay ugu jirtay 70% aaladaha ay taageerayaan
Hangouts waxay hadda la jaan qaadi kartaa Apple Watch